Qaybta 1.How in ay tirtirto gurmad Lugood on Windows
Qaybta 2. Sida loo eegista gurmad iPhone in computer
Lahaanshaha qalab macruufka ah ayaa noqon kara mid barako iyo inkaar. Awoodda qalab macruufka ah ku dhow yihiin xad-dhaaf ah, iyo xaqiiqada ah in aad dib kartaa wax walba on your computer dhigaysa isticmaalaya qalabka xitaa soo jiidasho. Laakiin, marmarka qaarkood hayaan, kuwaas oo qaadan kartaa ilaa tiro aad u badan oo ah meel bannaan, gaar ahaan haddii aad isticmaalayso qalabka kala duwan. Users badan ma fiiro gaar ah u door bidaan ay Lugood inay isha ku hay hayaan ay. Weli waad badbaadaan hayaan ka qalab aadan u hantidaan, ama waxaa laga yaabaa hayaan oo aan waxtar leh dambe.
Takhalusid hayaan aan loo baahnayn Lugood waxaad badbaadin kartaa wax badan oo meel fududee hayaan aad. Takhalusid hayaan ka Lugood la mid ma aha tirka file a on your computer. Gurmad The doonaa in aan lagu rakibin qashinka / Recycle Bin iyo waxa uusan si fudud loo soo kabsaday mar laga saaro. Sidaa darteed, hubi in aad si taxadar leh uga saarto xogta aad, in ay ka fogaadaan guuldarro nuqul kaliya ee macruufka aad. In sidaa la yeelo, hubi in aad raacdo tilmaamaha ku saabsan tirka gurmad Lugood.
Takhalusid kaabta Lugood waa yara fudud ee Mac ka badan on Windows. Marka laga Windows tirka gurmad Lugood aad u baahan tahay in ay helaan faylka gacanta.
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad hesho folder Data Codsiga. On Windows XP waxaad ka heli kartaa galka hoos Hel liiska ka mid ah hayaan Lugood under: C: Documents \_ iyo Settings \_ (username) \_ Codsiga Data \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ \_ kaabta. On Windows Vista oo sare folder ku yaal hoos soo socda: Raadi hayaan qalab ku \_ Users \_ (username) \_ AppData \_ barqiyey \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ \_ kaabta. Si aad u hesho folder sidan oo kale, waxaad u baahan doontaa in ay karti u "Show Qarsoon faylasha iyo fayl" doorasho ee Windows Explorer.
Hab kale ee loo helo folder ku xusan noqon adigoo gujinaya Start, khaanada% appdata% oo ku cidhiidhinaya geli doonto.
Marka aad ku sugan tahay galka ee kaabta, aad arki doonaa liiska fayl. Folder kasta waxaa referencing iPad ama iPhone gurmad ah u gaar ah. Ma awoodi doonaan in ay akhriyaan macluumaadka aan software xisbiga saddexaad Waxaad. Laakiin, waxa aad samayn karto waa xaq-guji gurmad ah ka dibna dooro guryaha si aad u eegto baaxadda gal. Si aad u tirtirto gurmad ah, waxaad u baahan tahay si ay u tirtirto ka galkan.
Marka la tirtiro gurmad ah gacanta, ha iloobin in aad u faaruqiso Recycle Bin.
Waxaa jira mid ka badan si ay u tirtirto aad hayaan Lugood. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waqtigan waa in ay soo jeedin ku bedeley aad Lugood. In sidaa la yeelo, Alt jaraa'id marka aad geli Lugood. Tani waxay noqon doontaa bedeley ku meel gaar ah, taasoo la micno ah marka aad baxdo, iyagu ma jiri doonaan.
Marka menu u muuqataa, dooran Edit ka dibna aad rabtid.
Markaas, guji Qalabka iyo aad u leedahay in la sameeyo oo dhan waa dooran gurmad aad rabto inaad tirtirto. Haddii aad qabtid qalab badan ama hayaan, aad dul istaagin karaan tilmaamaha mouse ka badan raad raac si aad u aragto faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan.
Ka Mac takhalusid hayaan Lugood waa yara fudud ka badan on Windows, sidii horayba u soo sheegnay. In sidaa la yeelo, u tag menu Lugood iyo guji aad rabtid.
Markaas, guji Devices.
Dooro gurmad aad rabto tageen, oo guji Delete kaabta.
Taasina waa badan waxay!
Marka la tirtiro hayaan dhex Lugood, waxaad ka arki kartaa taariikhda aad gurmad waxaa la abuuray. Haddii gurmad ah ayaa halkaas muddo dheer, ka dibna aad u badan tahay in aadan u baahan tahay mar dambe, tan aad leedahay gurmad ah ka cusub. Sidoo kale, haddii aadan lahayn qalabka aad sameeyey gurmad u ah, ka dibna aad adigu nabad tahay in ay tirtirto gurmad ah.
TunesGo Retro ka Wondershare waa software weyn oggolaanaysa in aad maamulato, share iyo soo celinta aad Lugood Music Videos si xor ah iyo dusha sare ee kuu oggolaadaan in aad si ay u maareeyaan iyo wareejiyo fariimaha, sawiro, files iyo xidhiidhka u dhaxeeya iPhone, iPad iyo PC.
Inkastoo habka gurmad-tirka ku xusan aan la jiray oo adag, waxay u yimaadeen yaabaa in guud ahaan sida ay u adag in la fahmo. Maxaa dhacaya haddii aan kuu sheegay in ay jirto aalad, taas oo ah mid aad u fudud in la isticmaalo, oo kaa caawin kara in aad is ogow of hayaan aad, iyo iyadoo hal click wareejiyo xogta oo dhan? Lucky idiin, taas waa run. Waxaan ka hadleynaa TunesGo Retro.
TunesGo Retro kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan iyo wareejiyo oo dhan faylasha, sawirrada, fariimo iyo xitaa xiriirrada. Iyadoo hal click kuu soo gudbin karaa inta u dhaxaysa sawiro aad iPhone / iPad iyo PC. Waxaad dajiyaan karaa iyo dhoofin aad xiriirka la leedahay oo si toos ah dari xiriir cusub ama wax ka bedel kuwa hadda jira. Dhamaan fariimaha SMS and MMS la garab badbaadin karaa iyadoo ku lifaaqan ay.
Haddii aad soo gaaray shil PC ah, ama aad si fudud u badiyay aad idil maktabadda Lugood, TunesGo Retro kaa caawin kara inaad dib u dhiska maktabadda Lugood waqti. Software Tani dhiska kartaa maktabadda ka iPod, iPhone iyo iPad. All inaad samayso waa isku xiro qalabka iyo ha ha dhoofinta music iyo video ay bilaabaan.
Iyadoo TunesGo Retro waxaad awoodi doontaa inaad si ay u gudbiyaan music ka maktabadda music qalab ayaa la Lugood, qalabka macruufka ama PC kasta. Music ayaa lala wadaagi doonaa dhammaan macluumaadka song oo tayo sare leh. Iyadoo wareejinta music, software waxa uu leeyahay awood u leeyahay inuu ogaado tus iyo nuqul ah files in aadan maktabadda horay kaliya.
TunesGo Retro si toos ah u hagaajin karaa tahay album, info album iyo gabaygayga info, oo xitaa ka sii badan. The database u baadha audio xitaa ogaan karaa remixes gaar ah.
Intaa waxaa dheer, iCloud music iyo videos la wadaagi karaa xitaa haddii lagu soo iibsaday IDs kala duwan Apple. Si fudud u jiidi oo hoos u files si aad maktabadda aad xulatay. TunesGo Retro taageertaa tag macluumaad song, farshaxanka album iyo playlists on Cloud sidoo kale la wadaago.
Share, maareeyaan iyo soo celinta aad music Lugood, videos iyo faylasha kale adigoo isticmaalaya TunesGo Retro. Waxaad nuqul ka kartaa faylasha oo dhan ee hal click in aad PC iyo iyaga gadaal ilaa waqti.
TunesGo Retro waa la jaan qaada qalab ku dhowaad kasta macruufka jiro. Waxa kale oo ay taageertaa Lugood ugu danbeeyay 12.1, iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus. Waxaad fiirin kartaa software this awood badan oo ay tijaabiyaan oo bilaash ah.
Sida loo dib Lugood Library aad dibadda Drive
Saddex Siyaabaha Share Your Lugood Music Library
> Resource > Lugood > Sida loo Delete kaabta Lugood